मृगौला विफल भनेको के हो ? — Vikaspedia
मृगौला विफल भनेको के हो ?
मृगौलाले काम गर्न छोडेको भनेर कसरी निदान गर्ने ?
एउटा मृगौलाले काम गर्न छोड्यो भने मृगौला विफल भएका मानिन्छ ?
मृगौलाले काम गर्न छोड्ने (मृगौला विफल) रोगको दुईवटा मुख्य प्रक ार
मृगौलाले अचानक काम गर्न छोड्नु
मृगौलाले दीर्घकालीन रूपमा काम गर्न छोड्न
हाम्रो शरीरमा सन्तुलन कायम गर्न हाम्रा मृगौलाले धेरै काम गर्दछन् । तिनले विषालु पदार्थलाई छानेर पिसाबबाट बाहिर फाल्छन् । तिनले पानी र सोडियम, पोटासियम तथा क्याल्सियम जस्ता इलेक्ट्रालाइटको मात्रालाइ सन्तुलित राख्छन् । तिनले अम्ल र क्षारको सन्तुलनलाई कायम गर्दै बढी भएको अम्ल र क्षारलाई बाहिर फाल्छन् । यही काम गर्ने तिनको क्षमतामा कमी आयो भने मृगौलाले काम गर्न छोडेको वा मृगौला विफल भनिन्छ ।
दुवै मृगौलाले काम गर्न छोड्यो भने रगतमा विषालु पदार्थ जम्मा हुन थाल्छ । रगतमा क्रिएटिनिन र युरियाको मात्रा बढ्न थाल्छ । रगतमा क्रिएटिनिन अलिकति बढ्यो भने पनि मृगौलाको कार्यक्षमतामा ठूलो ह्रास हुन्छ । क्रिएटिनिनको मात्रा १.५ मिलिग्राम प्रति डेसिलिटर मात्र भयो भन पनि यसले मृगौलाको कार्यक्षमतामा ५० प्रतिशत भन्दा बढी ह्रास आएका संकेत गर्दछ ।
मानिन्न । दुईवटा मृगौला मध्ये एउटा बिग्रियो वा काम गर्न छोड्यो भन मृगौलाको समग्र कार्यक्षमतामा कुनै उल्लेख्य प्रभाव नपर्न सक्छ । बचेका एउटा मात्र मृगौलाले दुईवटै मृगौलाको कार्यभार एक्लै सम्हाल्न सक्छ ।
मृगौलाले काम गर्न छोड्ने समस्या अचानक वा दीर्घकालीन प्रकृतिका हुन सक्छ ।
मृगौलामा अचानक खराबी भएमा छोटो अवधि भित्रै अर्थात् केही घण्टादेखि केही दिनभित्रै मृगौलाको कार्यक्षमता कम हुन्छ । यस प्रकारले मृगौलाल काम गर्न छोड्ने समस्या प्राय अस्थायी हुन्छ । सही उपचार भयो भन अधिकांश बिरामीको मृगौलाको कार्यक्षमता पहिलेकै सामान्य अवस्थामा फर्कन्छ ।
केही महिनादेखि वर्षसम्म निरन्तर रूपमा मृगौलाको कार्यक्षमता नास हुँदै पहिलेको अवस्थामा फर्किन नसक्ने समस्यालाई मृगौलाको दीर्घरोग भनिन्छ । मृगौलाको कार्यक्षमता ह्रास हुँदै गई मृगौलाले पूर्णतय काम नगर्ने चरणसम्म पुग्न सक्छ । रोगको यो सबैभन्दा खराब र ज्यान लिन अवस्थालाई अन्तिम अवस्थाको मृगौला रोग भनिन्छ ।
स्रोत : Kidney Education Foundation